Axmed Madoobe ” Ciidamadii Ka qeyb-qaatay Dagaalkii Beled-xaawo, Waan Abaal marinaynaa “ – SBC
Axmed Madoobe ” Ciidamadii Ka qeyb-qaatay Dagaalkii Beled-xaawo, Waan Abaal marinaynaa “
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa kulan la yeeshay Sarakiisha Ciidamada iyo Maamulka Magaalada Beledxaawo,
Wuxuu ku amaanay sida ay isaga difaaceen, weerarkii ay dhawaan kusoo qaadeen Ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay Madaxweynuhu, isagoo dhinaca kale ku booriyay in ay nabadgalyada deegaanka adkeeyaan iyagoo kaashanaya Bulshada Deegaanka.
Madaxweynaha oo ay wehelinayaan Sarakiil sare oo katirsan Dowlada iyo xubno labada gole kasocda waxaa ay soo kormeereen xerada oo ay hada si buuxda gacanta ugu hayaan Ciidamada Jubbaland iyadoo Madaxweynahu uu qudbad u jeediyay Askarta Dowlada.
Madaxweynahu wuxuu ku amaanay sida ay dhabar adayga ku dayashada mudan u muujiyeen Ciidamada qalabka sida oo maalmo kahor iska caabiyay weerar ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab.
Isagoo ka hadlayay dhibaatada ka jirta wadanka ayuu sheegay Madaxweynahu in Jubbaland looga baahan yahay isku tashi dhinaca amaanka ah iyo in ay sida ugu dhaw u bilaabanayaan hawlgalada Al-Shabaab lagaga xoraynayo meelaha ay gobolka kaga sugan yihiin.
“Caasimadii Jubbaland waxaa ay wali ku jirtaa gacanta cadawga waxaa hubaal ah Ciidanka ay tahay in ay halkaas tagaan oo ay xoreeyaan waa idinka Jarmal miyuu circa inooga soo daadan waa maya” ayuu yiri Madaxweynahu.
Al-Shabaab ayuu sheegay in ay jabeen oo ay dabka ku daadanayaan waxa kaliyah oo ay sugayaana ay tahay in la is raaciyo oo lasoo afjaro.
“Al-Shabaab maanta inagaa Dowlad ahaana ka xoog badan Mustaqbal ahaana idinkaa ka sharaf badan oo ka niyad wanaagsan” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii Al-Shabaab lala galay ayuu Madaxweynahu sheegay in la abaal marinayo oo ay helayaan si joogta ah xuquuqda ay leeyahiin loogana baahan yahay in ay ka qayb qaatan hawlgalada la isugu furayo deegaanka.
Waxaa uu sheegay Madaxweynahu in uu wakhti badan galin doono isku dubaridka Ciidamada inta uu Gobolka joogo isla markana wax badan oo wanaagsan ay qaban doonan.
Shabaab ayaa weerar ay ku qaadeen Goor Barqo ah Magaaladda Baladxaawo waxey ku laayeen Tiro Askara oo ka tirsan Maamulka Jubbland, iyadoona Magaaladaasi ay dib ula wareegeen Ciidamada Maamulka Jubbaland oo Kaashanaya Kuwa Dowladda Kenya